सर्वश्रेष्ठ वायरलेस चार्जिंग प्याड (नोभेम्बर २०२०) - एन्ड्रोइड र आईफोन - सामान
सर्वश्रेष्ठ वायरलेस चार्जिंग प्याड (२०२०) - एन्ड्रोइड र आईफोन
भविष्य यहाँ आधुनिक वायरलेस चार्जि theको सुविधाको साथ छ। यो एक खतरनाक दरमा प्रचलित छ, र तपाइँ यसलाई लगभग सबै उपकरणमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। भर्खरका स्मार्टफोनहरू, वायरलेस एयर पोडहरू, वा एयरपडहरू, यहाँ सम्म स्मार्टवाचहरूले वायरलेस चार्जिंग एकीकृत गर्न सुरु गर्यो।
यसैले, यो तपाईंलाई एक मजबूत वायरलेस चार्जिंग प्याडमा लगानी गर्न अपरिहार्य हुन्छ। यद्यपि त्यहाँ ब्यवल्डिंग विकल्प धेरै छन्। तपाईंले कुन कुराको बारेमा विचार गर्नुपर्दछ, डिजाइन, वा शक्ति? एक होवायरलेस चार्ज प्याडसंगत? मूल्य कारक बिर्सनु हुँदैन। विचार गर्न त्यहाँ धेरै छ!
चिन्ता नलिनुहोस्! यो मार्गनिर्देशन तपाईंलाई आधुनिक आविष्कारको साथ जारी राख्न मद्दतको लागि यहाँ छ! अब तपाइँ तपाइँको कुनै पनि समर्थन उपकरणको लागि वायरलेस चार्जिंग को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले गर्नुपर्ने सबै समीक्षा तल पढिएको छ। यो समीक्षा दिमागमा विभिन्न पक्षहरूको साथ सबै भन्दा राम्रो चार्जिंग प्याडहरू समावेश गर्दछ। तपाईले आफ्नो प्राथमिकतामा मिल्ने कुनै चीज पाउन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं समीक्षा पछाडि आफूलाई अलमल्लमा पार्नुभयो भने, त्यहाँ तपाईंको लागि चीजहरू सजिलो पार्नको लागि एक क्रेता मार्गनिर्देशक छ!
किन तपाईंले वायरलेस चार्जिंग प्याडलाई विचार गर्नुपर्छ?
त्यहाँ वायरलेस चार्जिंग प्याडलाई विचार गर्नुका थुप्रै कारणहरू छन्। तपाईंले एक चार्जिंग प्याड किन्नु अघि तपाईंको उपकरणले क्युइ-वायरलेस चार्जिंग समर्थन गर्दछ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्दछ। यस बाहेक, यहाँ केहि कारणहरू छन् जुन वायरलेस चार्जिंगलाई एक आकर्षक विकल्प बनाउँदछ:
तपाईंले USB कर्ड फेला पार्नुपर्दैन र प्रत्येक चोटि तपाईंलाई यसमा शुल्क लगाउनको लागि उपकरण प्लग गर्नु पर्दैन। यस क्षेत्र वरपर कुनै पling्गल वा अतिरिक्त पेसा छैन। यसैले, तपाई सजिलैसँग आफ्नो उपकरण छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र तारको चिन्ता नगरिकन यसलाई आफ्नो खल्तीमा राख्न सक्नुहुन्छ।
जस्तो कि तपाइँ लगातार प्लग वा अनप्लग गर्नुपर्दैन, यसले तपाइँको फोनको पोर्टलाई शारीरिक क्षति वा लगाउने र आँसुबाट रोक्दछ। धेरै ताररहित चार्जरहरू अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायहरू र हेरचाहको साथ आउँदछ अधिकतम चार्जिंग सुनिश्चित गर्न।
धेरै वायरलेस चार्जरहरू एक रातको चार्जको लागि उत्कृष्ट विकल्प हो। यदि तपाईं चार्जिंगमा तपाईंको उपकरण बिर्सनुभयो भने पनि, अधिकांश चार्जिंग प्याडहरू तपाईंको उपकरणको ब्याट्री जीवन र गुणहरूको रक्षा गर्न स्वत: कटौती गर्दछ।
वैकल्पिक रूपमा, तपाईं भविष्य संग राख्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै, वायरलेस चार्जिंग बिभिन्न उत्पादनहरूमा प्रचलित हुँदै गइरहेको छ। चाँडै नै यस्तो समय आउनेछ जब वायर्ड चार्जिंग एक पुरानो टेक्नोलोजी हुनेछ। यदि तपाईं जान्न र वायरलेस चार्जिंग अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ, अब समय छ।
अब, एकचोटि तपाईंले यो निर्णय गरिसक्नुभयो कि वायरलेस चार्जिंग तपाईंको लागि उत्तम विकल्प हो, लेखको मुख्य भागमा जान दिनुहोस्:
सर्वश्रेष्ठ वायरलेस चार्जिंग प्याड - पेशेवरहरू, विपक्ष
१.मोफी वायरलेस १W डब्लु चार्जिंग प्याड
आयाम:43.4343 x 43.4343 x ०. .3 ईन्चहरू
अनुकूलता:Qi- सक्षम उपकरणहरूको लागि यूनिवर्सल
सूचीको सुरूवात गर्न १W डब्ल्यू सम्मको बिजुली आपूर्तिको साथ एक अत्यधिक शक्तिशाली चार्जिंग हो, यदि तपाई पावरलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ भने यसलाई उत्तम-इन-क्लासको एक बनाउँदछ। यो डिजाइनमा कम्प्याक्ट छ र सजिलैसँग कहिँ पनि फिट हुन्छ, विशेष गरी ट्याबलेटटपमा तपाईंको अन्य ग्याजेटहरूको छेउमा।
यसको सार्वभौमिक अनुकूलता उत्तम भाग हो। यदि तपाईंलाई एकल वायरलेस चार्जिंग पोर्टको साथ सीधा विकल्प चाहिन्छ भने यो उत्तम विकल्प हो। तपाईं भर्खरको वायरलेस चार्जिंग फोनहरू चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुन Qi-Technology छ। थप रूपमा, यसले एयर पोडहरू, इयरबडहरू, र स्मार्टवाचहरूसँग पनि काम गर्दछ। यसैले तपाईंसँग सबै चार्जिंग आवश्यकताहरूको लागि एकल हब छ।
उत्तम वायरलेस चार्जिंग प्याडएक साबर देखि लुगाको डिजाइन छ जुन प्रशंसनीय छ र आधुनिक ग्याजेटहरूको साथ मिलाउँदछ। यद्यपि यसले कुनै पनि 'सजावट' सुविधाहरू प्रदान गर्दैन। अर्को शब्दहरुमा, यदि तपाइँ एक शक्तिशाली वायरलेस चार्जर चाहानुहुन्छ जुन काम सम्पन्न हुन्छ भने, यो विचार गर्न उत्तम विकल्प हो।
त्यहाँ अलिकता कमजोरी छ जसले केही मानिसहरूलाई चिन्तित तुल्याउन सक्छ। चार्जर न्यानो हुन्छ र एकदम तातो रिहाइन्छ। जे होस् यो डरलाग्दो छैन, केहि व्यक्तिले यसलाई रुचाउँदैनन्। यो एक शक्तिशाली चार्ज क्षमताको कारण हो।
मोबाइल कभर मार्फत चार्ज गर्न सकिन्छ (mm मिमी सम्म)
एक अल्ट्रा-साबर देखिको साथ स्लिक डिजाइन
१ W W उल्लेखनीय चार्ज क्षमता
यसले उल्लेख्य तातो गर्न सक्छ
यो एक भारी वायरलेस चार्जर हो
२. NANAMI Qi-प्रमाणित वायरलेस चार्जर
आयाम:.6..6 x .5. x x ०.7 ईन्चहरू
यदि तपाईं सुविधाहरुले भरिएको एक वायरलेस चार्जर चाहनुहुन्छ भने, यहाँ तपाईं विकिरण ढाल, ब्याट्री सुरक्षा, र तापमान नियन्त्रण संग NANAMI छ। थप रूपमा, यो दुर्घटना रोकथाम गर्न विदेशी वस्तु पत्ता लगाउने छ यदि तपाईंले केहि प्याडमा नहुनु पर्ने सामान राख्नु भयो भने, एक सामान्य गल्ती।
योसँग mm मिलिमिटर सम्मको प्रवेश छ, त्यसैले तपाईं फोनमा केस गर्न सक्नुहुनेछ र अझै तपाईंको उपकरण चार्ज गर्न प्रबन्ध गर्नुहोस्। यद्यपि यो दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि चुम्बकीय वा धातु केसहरू र अन्य वस्तुहरूमा काम गर्दैन।
यसका साथै यसले विभिन्न उपकरणको आवश्यकताहरू पूरा गर्न तीन चार्ज मोडहरू समर्थन गर्दछ। एयरपडहरू र अन्य समान उपकरणहरूको लागि, आईफोनका लागि .5.W डब्लु र सामसु and र अन्य उपयुक्त उपकरणहरूका लागि W.W डब्लु समर्थन गर्दै तपाईं W डब्ल्यू चार्जिंग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यो एक धेरै लागत प्रभावी उत्पादन छ 60० दिनसम्म पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टीको साथ। के यो अझ राम्रो हुन सक्छ? ठीक छ, तपाईं पनि एक 12 महिना प्रतिस्थापन वारंटी र 24/7 ग्राहक सेवा प्राप्त! सुविधाहरूले भरिएको एक वायरलेस चार्जिंग प्याडमा यी सबै
तपाईंको सुविधाहरूको साथ तपाईंको यन्त्रहरूको सुरक्षा गर्दछ
यात्रा मैत्री र अत्यधिक सस्तो
उपकरणमा राम्रो पकडको लागि गैर पर्ची सामग्री
पर्याप्त पावरसँग काम गर्न उचित एडाप्टर आवश्यक पर्दछ
यसले १ devices डब्लु सम्म चार्जिंगको साथ विशिष्ट उपकरणहरूको लागि पावरको अभाव हुन सक्छ
To. Tozo W1 वायरलेस चार्जर
आयाम:9.9 x x ०.२ x 9.94 ईन्चहरू
अनुकूलता:स्मार्टफोनहरू, ट्याबलेटहरू, र एयरपडहरू, Earbuds
सायद तपाईलाई केहि चाहानुहुन्छ जुन तपाईको उपकरणको प्रिमियम अपील पूरक छ। टोजो W1 रंगको विस्तृत श्रृंखलाको साथ आउँदछ र मैट कालोबाट गुलाब सुनसम्म चयन समाप्त। तसर्थ, तपाईं यो चार्जर छनौट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं सजावटको लागि एक नक साथ एक सौंदर्य प्रेमी अधिक हुनुहुन्छ।
यो चार्जर अपेक्षाकृत फराकिलो छ र तपाईंको घर वा अफिस सेटिंग्सको डल्लो तर व्यावहारिक डिजाइनको साथ पूरक हुनेछ। योसँग एक टिकाऊ मिरर प्यानल र एक एल्युमिनियम डिजाइन छ। एलईडी लाइट काम गर्न को लागी राम्रो काम गर्दछ जब उपकरण चार्ज चार्ज गर्न तयार छ वा उपकरणले चार्ज गरेको छ भने।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले6देखि mm एमएम चौडाइलाई समर्थन गर्न सक्दछ यदि तपाईं मोटा मोबाइल कभर प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसबाहेक, चार्जिंग प्याड पोर्टेबिलिटीका लागि कुनै पकेटमा स्लाइड गर्न मोटाई mm मिमी हुन्छ। तपाइँ वस्तु पहिचान, तातो नियमन, र अन्य सुरक्षा थप प्राप्त गर्नुहोस्।
प्याडको प्रिमियम अपीललाई थप सुदृढ पार्न त्यहाँ एक सदमे सर्किट सुरक्षा छ। यसले पावरमा १०W सम्म डेलिभर गर्दछ। यद्यपि, बिजुली आपूर्ति उपकरण र तपाईं प्रयोग एडेप्टर को अनुकूलता मा निर्भर गर्दछ। त्यो सहि छ! केवल दोष यो हो कि त्यहाँ आउने कुनै पनि एडाप्टर छैन। तपाईंले आफ्नै स्वामित्त्व प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
एक किफायती मूल्यमा सौंदर्यशास्त्र मिलाउन प्रीमियम अपील
सुविधाहरूको पूर्ण र राम्ररी उपकरण सुरक्षा
संकेतहरूको लागि स्मार्ट LED प्रकाश कार्यहरू
चार्जिंग शक्ति ढिलो हुन सक्छ यदि तपाईंसँग सही एडेप्टर छैन भने
एलईडी बत्ती उपयुक्त मैला छैन र धेरै उज्यालो हुन सक्छ
Q. QI-EU 1 १ वायरलेस चार्जिंग स्टेशनमा
आयाम:X x १२.२5ईन्च
सुविधा यसको उत्तम मा! यहाँ तपाईंसँग QI-EU वायरलेस चार्जर छ जसले तपाईंलाई एकको लागि चार्ज गराउँदैन तर तीन उपकरणहरूमा एकसाथ ल्याउँदैन। यो धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ र स्मार्ट सेन्सरहरू अनुकूलकको साथ कुनै पनि गिरावट बिना सहि ढ power्गले सही बिजुली आपूर्ति प्रदान गर्नका लागि छ।
यहाँ तपाइँले सामसु ,्ग, आईफोन, एयरपडहरू, स्मार्टवाचहरू, र अन्य च्यूइ-सक्षम फोनहरू मानक चार्जिंगको लागि चार फरक फरक चार्ज मोडहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। योसँग तीन भिन्न उपकरणहरू भण्डारण गर्न सही आकार र ठाउँ छ। यसैले, तपाईले बलियो चार्जि aका लागि उचित वायरलेस डिजाइन पाउनुहुन्छ।
यदि तपाईंसँग लामो केबलहरू छन् भने, तपाईं सजिलैसँग तिनीहरूलाई थप सुविधाको लागि तार होल्डरको साथ मोड्युलमुनि राख्न सक्नुहुनेछ। यो मानक सुरक्षाको साथ आउँदछ जस्तै ओभर-भोल्टेज, सर्ट-सर्किट, र अधिक चार्जिंग। एकै पटक तीन उपकरणहरू चार्ज गरे पनि तापमान या त समस्या होइन।
यो सबै ट्रेडहरूको एक ज्याक हो जुन तपाईं घर, अफिसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, कसैलाई उपहार दिनुहोस् वा वरपर यात्रा गर्नुहोस्। तीन चार्जिंगको बावजुद, यसले राम्रोसँग काम गर्दछ र कम्प्याक्ट डिजाइन छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि तपाईं Qc 3.0.० एडेप्टर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यसले उपकरणहरूलाई शक्तिको सही मात्रा प्रदान गर्न सक्दछ।
एक पटकमा तीन वायरलेस उपकरण चार्ज गर्नुहोस्
पर्याप्त हल्का र बहुउद्देश्यीय
चार अलग चार्ज मोड
मानक चार्ज गर्दै, उच्च-गति होइन
एडेप्टरको साथ आउँदैन
Y. युटेक वायरलेस चार्जर कम्बो
आयाम:19.१ x x 59.5959 x 48. 4.48 ईन्च
अनुकूलता:सबै उपकरणहरू, पिक्सेल, एयरपडहरू, र स्मार्टवाचहरू सहित
हुनसक्छ तपाईं कम्बोको केहि चीजको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको घर वा अफिसको फरक ठाउँमा प्लेसमेन्टको लागि उपयुक्त दुई वायरलेस चार्जरहरूको कम्बोको साथ युटेक छ। त्यहाँ दुई फरक डिजाइन छन्। एउटा चार्जर एक मानक चार्जिंग प्याड हो, र अर्कोमा 'स्ट्यान्ड-जस्तो' डिजाइन छ जुन तपाईले फोनमा शुल्क लिँदा वस्तुहरूको ट्र्याक राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
यो कम्बो वायरलेस चार्जिंग प्याडहरूका लागि सूचीमा अर्को थप हो जुन काम पूरा हुन्छ। यी सबै मानक संरक्षण र सुविधाहरूको साथ सीधा छन्। तपाईं चार-मोड चार्जिंग र अन्य समान थपहरू पाउनुहुन्छ। तिनीहरू एक USB केबलको साथ आउँदछ, तर तपाईले एडाप्टरमा छुट्टै लगानी गर्नु पर्छ।
यो स्थायित्व र आगो-प्रतिरोधको लागि एबीएस प्लास्टिक सामग्री हो। जे होस्, योसँग एक उत्कृष्ट निर्माण गुण छ। कम्पनीले तपाईंलाई अधिक मूल्यवान सामग्री खर्च गर्नुको सट्टा ग्याजेटहरूमा गुणात्मक थप ल्याउनमा बढी ध्यान दियो।
हामी नबिर्सौं कि निर्माणले उनीहरूलाई धेरै हल्का हुन सम्भव बनाउँदछ। युएसबी केबलहरू बाक्लो छन् र लामो पोशाक र च्याह्नको लागि सक्षम छन्। यी चार्जिंग प्याडहरूले तपाईंलाई सन्तुलित वा सन्तोषजनक प्रदर्शनमा बहुमुखी प्रतिभा र बहुउद्देश्यीय प्रयोग ल्याउँछ। तसर्थ, तिनीहरू शीर्ष वायरलेस चार्जरहरूको सूचीमा छन्।
पैसा कम्बोको लागि मान
बहुउद्देश्यीय उपयोगको लागि महान
सबै मानक वायरलेस चार्जिंग संरक्षण र सुविधाहरू
सुपीरियर निर्माण गुणवत्ता
यी अतिरिक्त शक्ति वा दक्षता प्याक छैन
सही Qc एडेप्टर प्रभावी ढंगले काम गर्न आवश्यक छ
Ee. जीहू वायरलेस कार चार्जर
आयाम:9.9 x .4. x x 3.3 ईन्च
अनुकूलता:Qi- सक्षम स्मार्टफोनहरू
अब तपाईं आफ्नो कार को लागी वायरलेस चार्जर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ! त्यो सहि छ! यहाँ तपाईंसँग एक धेरै दृढ र अत्यधिक कुशल Zeeho वायरलेस चार्जर छ, जसले १ 15 वाटको पावरसम्म पुर्‍याउँछ यदि तपाईं सही चार्जर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने। यो अत्यन्त लचिलो छ, र तपाईं स्थिति पोर्ट्रेटबाट ल्यान्डस्केपमा बदल्न सक्नुहुन्छ र यसको विपरित।
यो एक फर्म होल्ड छ र हतियारको साथ फोन स्वत: समारोह संग फोन होल्ड गर्न आउँछ। एक पटक तपाईले फोनमा केस राख्नुभयो भने, हतियारहरू फोन समाउन बन्द हुनेछ। यसैले तपाई आफ्नो कारमा स्मार्ट टेक्नोलोजी पाउनुहुन्छ। यसबाहेक, शरीरले-360०-डिग्री मोडलाई समर्थन गर्दछ। यसको मतलव तपाईले आफ्नो कारमा कुनै पनि असुविधा बिना कहिँ पनि यसलाई स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ।
चार्ज हुँदा तपाईं आफ्नो फोन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि यसले चार्ज गर्ने गतिलाई कम गर्नेछ। ताररहित चार्जर सबै प्रीमियम ब्रांड जस्तै सामसु LG, आईफोन, र एलजीसँग उपयुक्त छ। यसले अन्य क्यूई-सक्षम फोनसँग पनि काम गर्दछ। यद्यपि यससँग कम्प्याटिबिलिटी छैन वा अन्य उपकरणहरू चार्ज गर्न विकल्प छैन।
चार्जर मानक हो र कुनै समस्या बिना नै तपाईंलाई चार्ज ल्याउन mm एमएम केसिंगबाट पार गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं आफ्नो कार चार्जरमा फोनको साथ बन्द गर्नुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। यसले फोन छोड्ने छैन। तपाईंले फोन रिलीज गर्नका लागि साइडमा बटन थिच्नु पर्छ। यस प्रकार, तपाईले सुरक्षा थपेको छ।
सरल शब्दहरुमा, यो एक राम्रोसँग वाईडेड वायरलेस चार्जर हो जुन तपाईको कारको लागि फोन स्ट्यान्डको रूपमा पनि काम गर्दछ।
एकल डिजाइनमा वायरलेस चार्जर र फोन होल्डर
बलियो डिजाइन र-360० डिग्री दृश्य जहाँसुकै स्थापना गर्न
शक्तिशाली १ 15 वाट चार्जिंग युनिभर्सल क्यूआई-सक्षम स्मार्टफोन अनुकूलतासँग
यो मोड्युल को कारणले भारी हेवीवेट छ
कार चार्जिंगको लागि एयरपडहरू वा अन्य उपकरणहरूको समर्थन गर्दैन
W. WIMO चार्ज स्टेशन
पावर:2W बाट 15W मा फरक
आयाम:.2.२7 x 9.9 x x 4. .4 ईन्च
WIMO ले तपाइँलाई एक चार्जिंग स्टेशनमा अर्को तीन ल्याउँदछ तर डिजाइन र सुविधाको लागि अधिक ध्यान दिएर। यदि तपाईंलाई सूचीमा अघिल्लो चार्जिंग स्टेशन मनपर्‍यो भने, त्यसोभए तपाईं यससँग प्रेममा पस्नुहुनेछ। यो निस्सन्देह सुविधा को लागी एक उपयोगकर्ता को सुविधा को लागी एक उच्च अंत चार्जर हो।
तपाईंसँग स्मार्टवाच र्‍याप-वरपर मॉड्यूल, शीर्षमा एक एयरपड्स केस भण्डारण, र तपाईंको स्मार्टफोनको लागि स्ट्यान्ड छ। यो चलाक हो र तपाइँको कोठा वा घर मा तपाइँको स्मार्ट उपकरण संगठित र भण्डारण गर्न को लागी यो सजिलो बनाउँछ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले तपाईंलाई स्मार्टवाचको लागि दुई-वाट, एयर पोडहरूको लागि तीन-वाट, र स्मार्टफोनको लागि पाँच देखि दस वाटसम्म ल्याउँछ। यो आकारको लागि लगभग आठ औन्स र यात्रा मैत्री हो। तपाईले सबै मानक सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ ओभर ताप, ओभर-चार्जिंग, र सर्ट सर्किट रोक्नको लागि, अन्य समस्याहरूको बीचमा।
एक स्टेशन बहु उपकरण चार्ज पूरा गर्न
भारी शुल्क र दीर्घ चिरस्थायी डिजाइन
२ एम्प्स वर्तमान रेटिंग
अत्यधिक किफायती र यात्रा मैत्री
बलियो पोशाक र फाँट, वा नियमित यातायातको लागि निर्माण गरिएको छैन
तपाईंलाई अधिकतम बिजुली आपूर्तिको लागि सही चार्जर चाहिन्छ
Mir. 1 वायरलेस चार्जिंग मैटमा मिरमटेक २
आयाम:.5..5 x x x ०. In ईन्चहरू
के तपाइँ एक वायरलेस चार्जर खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाइँको स्मार्टफोनमा कोमल छ? त्यसो भए तपाईको लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प यहाँ छ। मिरमोटेकले तपाईलाई एक वायरलेस चार्जर ल्याउँछ जुन निःशुल्क शैली प्लेसमेन्ट सक्षम गर्दछ। तपाईले स्मार्टफोन फिट गर्नुपर्दैन वा कुनै खास स्थानमा राख्नु हुँदैन। जबसम्म तपाईंको उपकरणको वायरलेस पोर्ट म्याटसँग पign्क्तिबद्ध हुन्छ, यसले उत्तम कार्य गर्दछ।
प्याड एक इन्टि-स्लिप फुट, नरम कपडा, र कूलि holes प्वालको साथ अधिकतम प्रदर्शन कायम राख्नको साथ आउँदछ। योसँग स्मार्ट चिप छ पावरको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न र बहु ​​उपकरणहरूको वरिपरि काम गर्न। यद्यपि तपाईले एकैचोटि दुई उपकरणहरू राख्नु पर्छ।
वृद्धि सुरक्षा, ओभरलोडि,, ओभरचार्जिंग, सर्ट सर्किट, र अन्य सबै समस्याहरूको उचित सुरक्षा छ। यसको बारेमा सोच्नुहोस्। यदि तपाईंलाई राम्रो अनुकूलता र साधारण प्रकार्यको साथ लक्जरी चार्जर आवश्यक छ भने, यो तपाईंको लागि उत्कृष्ट विकल्प हो।
एक 18W शक्तिशाली चार्जरको साथ आउँछ
एक पटकमा दुई स्मार्टफोन चार्ज गर्न डुअल चार्ज गर्दै
एन्टी-पर्ची र कोमल मैट कपडा
उपकरणलाई म्याट र चार्जमा कहिँ पनि राख्नका लागि पाँचवटा कुण्डलहरूले तपाईंलाई चार्ज गर्दैछ
एक सीधा विकल्प
दोस्रो उपकरणमा कम पावर प्रदान गर्दछ
डिजाईनको लागि अलि धेरै भारी भयो
क्रेताहरू वायरलेस चार्जिंग प्याडहरूको लागि मार्गदर्शन:
तपाईंले विचार गर्न सक्नुहुने पहिलो चीज भनेको तपाईंको स्वामित्वको वायरलेस उपकरणको प्रकार हो। यदि तपाईंसँग वायरलेस चार्जिंगको साथ स्मार्टफोन छ भने, तपाईंलाई उपयुक्त प्लेसमेन्ट विकल्पको साथ तपाईंको पावर आवश्यकता फिट गर्नको लागि कम्तिमा पनि १०W चार्जिंग आवश्यक पर्दछ।
धेरै जसो स्मार्टवाचहरूमा, W डब्ल्यू चार्जिंग पर्याप्त छ। यदि तपाईं एयरपडहरू वा अन्य समान उपकरणहरूको लागि वायरलेस चार्जर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तब W डब्लू सही विकल्प हुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाईंसँग बहुविध उपकरणहरू छन्, तब तपाईंले पक्कै एक ताररहित चार्जिंग स्टेशन प्राप्त गर्नुपर्नेछ। एक वा दुई मध्ये एक मा एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ।
१. उपकरण अनुकूलता
वायरलेस चार्जरमा उपकरण अनुकूलताको लागि जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्, केवल विद्युत आपूर्तिमा भर पर्दैन। केही चार्जरहरूले १० डब्लु चार्जिंग प्रस्ताव गर्न सक्दछन्, तर के तिनीहरू भर्खरको सामसु Galaxy ग्यालेक्सी वा आईफोन मोडेलसँग उपयुक्त छैनन् भने? यदि तपाईले भविष्य-प्रभार चार्जर प्राप्त गर्नुभएन भने कुनै विन्दु छैन।
२. क्षमता चार्ज गर्दै
तपाईले पहिले नै प्रत्येक उपकरणको लागि मानक पावर आवाश्यकता पाउनुभयो, चार्ज गर्ने क्षमतासँग धेरै कामहरू गर्नुपर्दछ यसले एक पटकमा कति उपकरणहरू चार्ज गर्न सक्दछ। केही वायरलेस चार्जरले तपाईंलाई भन्दछ कि उनीहरू दुई वा तीन उपकरणहरू चार्ज गर्न सक्दछन्, तर विद्युत आपूर्ति ढिलो हुन सक्छ।
तपाईं दुई फोनहरूले एकै समयमा एक वायरलेस चार्जरमा उही समयमा चार्ज हुने आशा गर्न सक्नुहुन्न। कम्पनीले तपाईंलाई गति प्रदान नगरेसम्म होईन। त्यसो भए पनि, उत्तममा, वायरलेस चार्जरहरूको लागि प्राय: जसो धेरै एडाप्टरहरूले १W डब्लु सम्म बिजुली आपूर्ति गर्छन्। त्यसो भए तपाईले पाउनु पर्ने अधिकतम दुई फोनका लागि 7.W डब्लु हुन्छ।
USB. USB विचार
एक वायरलेस चार्जर पूरै ताररहित हुँदैन। जबकि यसको लागि तपाईंको फोनलाई वायर्ड जडान हुन आवश्यक पर्दैन, तपाईंलाई तपाईंको चार्जिंग प्याडको लागि यूएसबी वा एडाप्टर चाहिन्छ। यसैले, तपाइँ केबलको गुणस्तर र यसको लम्बाइ विचार गर्न चाहानुहुन्छ यसले तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ भनेर निश्चित गर्न।
Prot. सुरक्षा सुविधाहरु
तपाईंले एक चार्जर लिनु पर्छ जुन ओभर ताप, overcharging, र अधिक भोल्टेज सुरक्षा गर्न पर्छ। सर्ट सर्किट, पावर सर्जेस, र हीटिंग माध्यमिक विचार हो। वाटरप्रूफिंग पनि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। केहि ताररहित चार्जरहरु संग एक विदेशी वस्तु पत्ता लगाउन र चार्ज कटौती गर्न अतिरिक्त सेन्सर छ। तपाईं यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं थप सुरक्षा चाहनुहुन्छ भने।
वायरलेस चार्जिंग अझै पनी एक अप्रत्याशित टेक्नोलोजी हो। तपाई प्रसिद्ध ब्रान्डमा टाँस्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, केहि कम ज्ञात ब्रान्डहरू जुन वारेन्टी प्रदान गर्दछ एक आकर्षक विकल्प पनि हुन सक्छ। यदि उनीहरूले कुनै ग्यारेन्टी प्रस्ताव गरेमा यसको मतलब तिनीहरू गुणमा विश्वास गर्दछन्। तपाईं आश्वासन दिन सक्नुहुन्छ कि उपकरण लामो समयसम्म वारंटीमा चल्दछ।
Ad. एडेप्टर आवश्यकता
धेरै वायरलेस चार्जिंग प्याडहरू एडेप्टरको साथ आउँदैन र तपाईंलाई हैन्जिंग छोड्न। तपाईंले थप लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ। अक्सर, व्यक्तिहरू पाउनको लागि वायरलेस एडाप्टरको सहि प्रकारलाई थाहा हुँदैन। तपाईं एक समर्थन एडाप्टर छ वा छैन भनेर हेर्न वायरलेस चार्जिंग प्याड किन्नु अघि विशिष्टता वा म्यानुअल पढ्नुहोस्। यदि होईन भने त्यसो हो भने तपाईंले एउटा किन्नुपर्दछ।
धेरै तपाईंको अन्य चार्जरहरू जस्तै तपाईं पनि एक वायरलेस चार्जर प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ जुन पोर्टेबल वा यात्रा मैत्री हो। यसका लागि हल्का वजन र कम्प्याक्ट आकार तपाईंको प्राथमिक विचार हुनुपर्छ। जहाँसम्म, यदि तपाईं तिनीहरूलाई निश्चित पोर्ट वा स्टेशनको साथ घर वा कार्यालय प्रयोगको लागि चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यस पक्षको बारेमा धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन।
अन्तमा, डिजाईन, रंग, र अन्य चीजहरू तपाईंको व्यक्तिगत प्राथमिकतामा आउँछन्। यदि तपाइँ एक प्रीमियम स्तर वायरलेस चार्जर चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले कुनै पनि मूल्य विकल्प विचार गर्नु हुँदैन। धेरै सस्तो चार्जिंग प्याडहरू तपाईंको उपकरणलाई हानी पुग्न सक्दछ। त्यसकारण गुणबाट सावधान हुनुहोस्। सँधै प्रमाणित वा विश्वासयोग्य स्रोतबाट खरीद गर्नुहोस्।
१ क्यू के वायरलेस चार्जिंग तारको चार्ज भन्दा राम्रो छ?
बर्ष:वायरलेस चार्जिंगले तपाईंलाई प्लग-इनको आवश्यकता बिना नै तपाईंको उपकरण राख्ने सुविधा दिन्छ। जे होस्, यदि तपाई गतिको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने ताररहित चार्जि than भन्दा वायरलेस चार्जिंग कम छ। तपाईं सजीलो तारको चार्जमा २ W डब्लू गतीसम्म लिन सक्नुहुनेछ जबकि वायर्ड चार्जिंगमा १ around डब्लु चार्जिंग क्षमता छ।
त्यस बेला पनि प्रायः फोनहरूले चार्ज दरहरू ढिलो समर्थन गर्दछ। वायर्ड चार्जिंग सुरक्षित छ तर तारको असुविधा छ।
२Q वायरलेस चार्जरहरू कति लामो हुन्छ?
बर्ष:वायरलेस चार्जिंग अन्य अन्य नयाँ उपकरणहरू र ग्याजेटहरूको साथ सिnc्कमा छ। यसैले, एकल वायरलेस चार्जर प्रतिस्थापनको आवश्यक भन्दा पहिले दुई देखि तीन बर्ष सम्म टिक्न सक्छ। यद्यपि यो चार्जरको गुणस्तरमा पनि निर्भर हुन सक्छ। यदि तपाईं सस्तो चार्जरहरू खरीद गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरू लामो समय सम्म रहोस् भनेर आशा नगर्नुहोस्। यो जटिल संयन्त्रको कारण वायरलेस चार्जरको गुणवत्तासँग कहिले पनि सम्झौता गर्नु राम्रो हुन्छ।
3Q। के यो वायरलेस चार्जर प्लग इन पावर आउटलेटमा छोड्न सुरक्षित छ?
बर्ष:हो, यो एक वायरलेस चार्जर प्लग प्लग छोड्न सुरक्षित छ जबसम्म तपाईंसँग राम्रो चार्जर गुणवत्ता छैन। सस्तो विकल्पका केही पुराना संस्करणहरू तपाईंलाई प्लग छोड्नको लागि सुरक्षित नहुन सक्छ। यद्यपि, तिनीहरू मध्ये धेरै सजिला रातको चार्जको लागि डिजाइन गरिएको हो। यसैले, यसले प्लग इन राख्न सुरक्षित छ भनेर प्रमाणित गर्दछ।
त्यहाँ तपाईंसँग यो छ! को सूचीसर्वश्रेष्ठ वायरलेस चार्जिंग प्याडहरू! यसले विविध प्राथमिकता भएका व्यक्तिलाई अपील गर्न लचिलो दायरा समेट्छ। चाहे तपाईं बजेट, पोर्टेबिलिटी, सुविधा, वा धेरै चार्जिंगलाई विचार गर्न चाहानुहुन्छ, यस सूचीमा सबै कुरा छ। यसैले, यो बजारमा उपलब्ध शीर्ष वायरलेस चार्जरहरूको लागि तपाईंको एक स्टप समीक्षा हो।
क्रेता गाईडले तपाईंलाई एक राम्रो सिंहावलोकन र एक वायरलेस चार्जरको विभिन्न पक्षहरूको विवरण प्रदान गर्नुपर्दछ। यो अझै पनि बजारमा एक अपेक्षाकृत नयाँ अवधारणा हो, तर तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यो द्रुत विकासको क्रममा छ। सूचीबाट वायरलेस चार्जिंग प्याडको सहि चयनको साथ आश्वासन दिनुहोस्।
पीसी को लागी iOS Emulators
चयन अनलाइन नि: शुल्क हेर्नुहोस्
जहाँ लाइनमा टिभी कार्यक्रमहरू हेर्ने
अहिलेको टिभी कार्यक्रमहरू हेर्नका लागि
भिडियो कन्भर्टर एमपी3गर्न युट्यूब
स्ट्रिमिंग टिभी नि: शुल्क साइन अप छैन